MY SOMALI CULTURE: Ikraan Caraale Waraysi 2011.
Waraysi kooban oo Fanaanada da'da yar ee Ikraan Caraale siiyey shebekada Calanka.com, iyadoo ka warantay bandhig faneedkeeda ay ku qabatay magaalada Oslo ee dalka Norway.
Heesaha ay soo bandhigtay oo iskugu jiray kuwo cusub iyo kuwii horeba ayey si aad ah uga heleen shacbi weynaha reer Oslo ee sida weyn u taageera Ikraan.
Ikraan waxay sheegtay in heesta ay ugu jeceshay heesaheeda ay tahay "Gaadhsiiya", iyada oo kalsooniyi ka muuqatona waxay u sheegtay wariyaha Calanka.com in ay aad ugu faraxsan tahay soo dhaweynta iyo taageerada balaadhan ee ay ka heshay taageerayaasheeda.
Heesta Gaadhsiiya oo ahayd hees aad u macaan oo jacayl ah, ayaa nasiib xumo u soo jiday fanaanada wareer iyo dacaayad sumcad dilid ah oo aan sal iyo raad lahayn bilahan ina soo dhaafay. Iyada oo lagu eedeeyey in ay xidhiidh la leedahay mid ka mid ah xidigaha kooxda dhalinyarada ah ee Waayaha Cusub, ninkaa dhalinyarada ah oo isla markaana ah maamulaha guud ee kooxda ayey tahay marwadiisu xidigta kowaad ee kooxda. Iyadoo lagu eedeeyey Ikraan inay u qaaday heesta Gaadhsiiya ninka xaaska leh, mudo yar kadibna Falis Cabdi Maxamuud oo waayaha cusub ka tirsani soo saartay heesta Garaadlaay.
Waxaa warbaahinta aad uga beeniyey arrintaasi Ikraan, abwaankii heesteeda qoray iyo waliba kooxda Waayaha Cusub, iyadoo labada dhinacba khasaare aad u weyni ka soo gaadhay dacaayadaa rakhiiska ah. Taasi oo wax weyn u dhintay iibka albanadoodii iyadoo dadweynuhu ku mashquuleen kutiri kuteentii sheekadaasi, wakhti badana kaga lumay labada dhinacba sharixida iyo beeneynta arrintaasi. Waxa hubaal ah in Ikraan Caraale horumarkeedu noqday mid degdega oo si lama filaan ah ku noqday dad badan oo hore ugu soo jiray baaxada fanka. Iyada oo isku darsatay cod macaani iyo qurux dheeli tiran, taasi oo u soo jiidi karta cadow faro badan.
Sidaa daraadeed wariyaha Calanka.com wuu ka gaabsaday inuu la soo qaado Ikraan Caraale arrintaa iyada ah, iyadoo ay suurto gal tahay in aanay Ikraan rabin dib u eegista sheekadaasi.
Waxa hubaal ah inay rabto hor u socodkeeda iyadoo aad ugu faraxsan sii wadida safarkeeda, oo ay tidhi " waxaan isu mari doonta wadamo badan oo yurub ka tirsan" iyadoo daadihin doonta bandhig faneedyo kala duwan. Anaguna hadaanu nahay bahda MY SOMALI CULTURE waxaan leenahay garabkaga Ikraan, guulna ku gaadh hadafkaaga.
Waxa idiin soo diyaarisay...................Milgo USA
Ku dhiibo ra'yigaaga sanduuqa hoose.
Posted by Milgo at 8:16 PM
Labels: Waraysi Gaara Ikraan Caraale